डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै स्थानीय तथा स्वास्थ्य कर्मी आन्दोलनमा – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः १९ असार २०७५, मंगलवार १८:३५ July 3, 2018 हातेमालो संवाददाता
जुम्ला । जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स, विद्यार्थी तथा स्थानीय बासीन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय बासीन्दा अर्ध नग्न सहित आन्दोलनमा उत्रिएको डा केसीका साथमा रहेका किशोर केसीले जनाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएको महत्वपूर्ण विषय फेरबदल नगरी प्रतिस्थापन विधेयक जारी गर्नु पर्ने मागसहित चार दिनदेखि जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाको कवर्ड हलमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स र विद्यार्थी मंगलबार आकास्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
डा. केसीको आधारभूत मानवअधिकार समेत सरकारले हनन गरेको भन्दै प्रतिष्ठानका चिकित्सक मौन प्रर्दशनमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले डा. केसीले उठाएका माग सरकारले पुरा गर्नु पर्ने भन्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । चिकित्सकको प्रदर्शनका कारण प्रतिष्ठानको सेवा प्रभावित भएको छ।
खेलकुद विकास समिति जुम्लाको कवर्ड हलमा सामान्य उपचार गर्न समेत कठिनाई भइरहेकोले उपचारकालागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा लग्न माग उठिरहेको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्थान बन्द(हड्ताल निषेध क्षेत्र भएकाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालमा डा. केसीलाई स्तानान्तरण गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
सगरमाथा सिमेन्ट गुणस्तरहीन पाइएपछि नमुना परीक्षणका लागि काठमाण्डौं पठाइयो
राजपाको असन्तुष्ट समूहले खोल्यो नयाँ पार्टी, अशोककुमार संयोजक
चार हात, चार खुट्टा भएको अनौठो बच्चा जन्मियो